Amara iwu na ọnọdụ ojiji ▷ Discover Online ➡️ ➡️
Nkwupụta iwu na ọnọdụ iji
1 Nkwupụta iwu na ọnọdụ iji
1.1 Ebumnuche nke weebụsaịtị a
1.2 Iji weebụ
1.3 Ọrụ Onye Ọrụ
1.4 Mkpuchi data na nzuzo nzuzo
1.5 Ihe omume ARCO
1.7 Ikike ikike ọgụgụ isi na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
1.8 Njikọ njikọ
1.9 Ewepu nke nkwa na ibu oru
1.10 Iwu na ikike
A tụlere akwụkwọ na 25 / 03 / 2018
• Aha ụlọ ọrụ bụ: Online Servicios Telemáticos SL
• officelọ ọrụ edebanyere aha nọ na C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Nye ihe metụtara ọdịnaya nke Nzụ ahịa n'ịntanetị.
Mgbe ị na-eji websaịtị Disco.online, Onye ọrụ kwenyere na ya agaghị eme omume ọ bụla nwere ike imebi onyonyo, ọdịmma na ikike nke Disco.online ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụ nke nwere ike imebi, gbanyụọ ma ọ bụ bufee weebụsaịtị achọpụta. n'ịntanetị ma ọ bụ nke ahụ ga - egbochi, n'ụzọ ọ bụla, ojiji nke web.
Disco.inline na-agbaso usoro nchebe zuru oke iji chọpụta ịdị adị nke nje. Agbanyeghị, Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịmara na usoro nchekwa nke sistemụ kọmputa na thentanetị enweghị ntụkwasị obi kpamkpam yana, ya mere, achọpụta.online enweghị ike ịkwado na enweghị nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike ibute mgbanwe na sistemụ kọmputa. (sọftụwia na ngwaike) nke Onye ọrụ ma ọ bụ na kọmputa na dọkụmentị na faịlụ ndị dị n'ime ya.
• Chekwaa, bipụta ma / ma ọ bụ bufee data, ederede, onyonyo, faịlị, njikọ, sọftụwia ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ adịghị mma dịka usoro iwu siri dị, ma ọ bụ na dịka atụmatụ nke Disco.online maka ịbụ onye iwu na-akwadoghị, ime ihe ike, iyi egwu, mkparị, nkwulu, okwu rere ure, okwu rụrụ arụ, ịkpa ókè agbụrụ, ịkpa ókè agbụrụ ma ọ bụ nke ọzọ na-asọ oyi ma ọ bụ nke megidere iwu ma ọ bụ nke nwere ike ibibi ụdị ọ bụla, ọkachasị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ.
Dịka onye ọrụ, a gwara gị na ịnweta weebụsaịtị a apụtaghị, n'ụzọ ọ bụla, mmalite nke mmekọrịta azụmahịa na Online Servicios Telemáticos SL n'ụzọ dị otú a, onye ọrụ ahụ kwenyere iji weebụsaịtị, ọrụ ya na ọdịnaya na-enweghị nkwekọrịta. iwu ugbua, ezi okwukwe na usoro ọha. Amachibidoro iji saịtị weebụ maka ebumnuche na-ezighi ezi ma ọ bụ nke na-emerụ ahụ, ma ọ bụ nke ahụ, n'ụzọ ọ bụla, nwere ike ibute mmebi ma ọ bụ gbochie ọrụ nke weebụsaịtị ahụ.
• mwepụta ha, nkesa ma ọ bụ mgbanwe ha, na akụkụ niile ma ọ bụ na akụkụ, belụsọ na ikike ndị nwe ha nyere ikike;
Vicntanetị Servicios Telemáticos SL na-ekwe nkwa nzuzo nke data nke USERS nyere na ọgwụgwọ ha dị ka iwu dị ugbu a gbasara nchedo nke data onwe onye, ​​na-agbaso ọkwa nchebe nke data nke iwu chọrọ.
Online Servicios Telemáticos SL gbara mbọ na iji data agbakwunye na faịlụ a "WEB Users and SUBSCRIBERS", ịkwanyere nzuzo ha ugwu ma jiri ha na ebumnuche otu, yana ime ha oke maka ịchekwa na imeghari ihe niile. ihe ndị a ga-egbochi mgbanwe, mfu, ọgwụgwọ ma ọ bụ ikike na-enweghị ikike, dị ka usoro nke Iwu Iwu 1720/2007 nke December 21, nke kwadoro Iwu maka mmepe nke Iwu Organic 15/1999 nke 13 Disemba, Nchedo Nke Onwe.
Onye ọrụ ahụ nwere ike igosipụta, gbasara data anakọtara, ikike a ghọtara na Iwu Organic 15/1999, nke nnweta, ndozi ma ọ bụ kagbuo data na mmegide. Iji gosipụta ikike ndị a, onye ọrụ ga-edebanye aha ya ma debanye aha ya na ha nwere ike iziga, yana foto nke nnabata ha ma ọ bụ akwụkwọ njirimara ha nhata, na adreesị ozi-e nke Online Servicios Telemáticos SL (ya bụ, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) ma ọ bụ site na email, tinye foto nke ID ka: info (na) discover.online. Tupu ụbọchị iri, a ga-aza arịrịọ ahụ iji kwado mmezu nke ikike ị rịọrọ ịme.
Servicios Telemáticos SL na ntanetị na-agwa anyị na ndị ọrụ na ndị ahịa nwere ụdị mkpesa.
Onye ọrụ ahụ nwere ike ịme nkwupụta site na ịrịọ maka ụdị nkwupụta ha ma ọ bụ site na izipu ozi email na ama (na) Discover.online na-egosi aha na aha nna gị, ọrụ ahụ ma ọ bụ ngwaahịa zụtara yana ịkọwa ihe kpatara azịza ha.
I nwekwara ike iduzi ihe ị na-ekwu site na nzipu ozi zigara: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) n'iji, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ụdị nkwado ndị a:
Mee uche nke: Online Servicios Telemáticos SL
E-mail: Ama (na) achọpụta.online
• Aha njirimara:
Site na Ọnọdụ Ndị a, enweghị ikike ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike ụlọ ọrụ na-ebufe na ntanetị web.online nke ihe ọgụgụ isi ya bụ nke Online Servicios Telemáticos SL, mmeputakwa, mgbanwe, nkesa, nkwukọrịta ọha na eze, nyere ndị mmadụ ka amachibidoro Onye ọrụ. , mwepụ, n'iweghachi, ebugharị ma ọ bụ iji ụdị okike ọ bụla, n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ usoro, nke ọ bụla n'ime ha, belụsọ n'okwu ndị enyere ya ma ọ bụ nye ya ikike site na njide ikike ahụ.
N'ọnọdụ nke onye ọrụ ma ọ bụ onye nke atọ chere na ngabiga ikike ikike ọgụgụ isi ziri ezi site na ntinye nke ụfọdụ ọdịnaya Weebụ, ha ga-agwa ndị kwuru ihe ọnlaịnụ na Servicios Telemáticos SL nke na-egosi:
• Ozi nke onye nwere mmasị onye nwere ikike agwagoro ma ọ bụ gosipụta nnọchite anya nke ọ na-eme ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na-abụghị ndị ọzọ nwere mmasị na-ewepụta nkwupụta a.
Online Servicios Telemáticos SL jụrụ ọrụ ọ bụla na ozi dị na mpụga nke Weebụ a, ebe ọ bụ na ọrụ nke njikọ ndị ahụ na-apụta bụ naanị ịgwa onye ọrụ banyere ịdị adị nke isi mmalite ozi ndị ọzọ n'otu isiokwu. Online Servicios Telemáticos SL gụpụrụ ibu ọrụ ọ bụla maka ịrụ ọrụ nke njikọ dị mma ndị a, nsonaazụ a nwetara site na njikọ ndị kwuru, izi ezi na iwu nke ọdịnaya ma ọ bụ ozi enwere ike ịnweta, yana mmebi nke nwere ike ịta ahụhụ. Onye ọrụ ahụ sitere na ozi achọtara na weebụsaịtị wekọtara.
Online Servicios Telemáticos SL anaghị enye nkwa ọ bụla ma ọ bụ na ọ ga-akwụ ụgwọ, n'ọnọdụ ọ bụla, maka mmebi ụdị ọ bụla nke nwere ike ibute:
• Enweghị nnweta, mmezi yana arụmọrụ nke weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ya na ọdịnaya;
Na mkpokọta, mmekọrịta dị n'etiti Disco.online na ndị ọrụ nke ọrụ telematic ya, nke dị na weebụsaịtị a, dị n'okpuru iwu na ikike na ikike Spanish yana urtslọikpe Granada.
Ọ bụrụ na Onye ọrụ ọ bụla nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọkwa iwu a ma ọ bụ nkọwa ọ bụla gbasara weebụsaịtị Disco.online, ha nwere ike ịga na ozi (na) discover.online
Discover.online nwere ikikere iji gbanwee, n'oge ọ bụla na enweghị ọkwa, ngosi na nhazi nke weebụsaịtị Discover.online, dị ka ọkwa iwu a.